ISONDO LINGCOLA XA KUTHENI? – By Chap Yezimanga »
← MZALA WAMI (SHORT STORY) by Fantasy Traveller
IMITHETHO YOKUDLA INKOMO (HAYI LEDLA UTSHANI) by Not Your Average Zulu Guy →
by My Nunuza (My Sweetie Pie) Posted on August 28, 2012
ukwabelana ngesondo (Xhosa) – ukuya ocansini (Zulu) – sex (English)
imilebe (Xhosa) – izindebe (Zulu) – lips (English)
“Iyho! Sisi uyakundixolela, imilebe yakho ithi ndiphuze!” La ngamazwi omfundisi wenkonzo exelela elinye inenekazi endilaziyo. Eli nenekazi, masithi igama lalo nguNokuzola, lindibalisela likhubeke ngeyona ndlela engathethekiyo kuba le nto ithethwa ngumfundisi owaziyo ukuba yena Nokuzola lo utshatile.
“Ndiyayiqonda ukuba ungumntu uyavukelwa naye kodwa makangade ayithethe ndisiva. Okwesibini uyitsho njani le nto endibona uba nditshatile? Ndizakummamela njani ke ngoku xa ethetha izinto zenkonzo? Hayi suka maan, mnxm.” Ngalo mazwi watsho wanikina intloko usisi ndimbona ukuba ingathi angawukhuphela apha kum umsindo wakhe.
Le ncoko indenze ndacinga izinto ezininzi.
Okokuqala, kutheni le nto kungamnkelekanga ukuncoma inene okanye inenekazi xa ubuhle balo, noba bunjani bukwenza ube neenkanuko zomzimba? Wonke umntu unazo ezi nkanuko kodwa uzigcine ngaphakathi, azixelele abahlobo abasenyongweni kuphela. Amaxesha amaninzi kwenziwa ngathi azikho kwazona. Kungoba kutheni kusenziwa kanje?
Yintsinda-badala into eyaziwayo ukuba iyenzeka kumntu wonke kodwa akwankelwa uthetha ngayo. Kubonakala ngathi ukuze umntu abe uyahlonipheka kufuneka abe ngathi akanazo iinkanuko, akalali namntu. Nditsho naxa sele enomlingane kuyaqhutyekwa ibe ngathi bangabahlobo nje, abalali. Andifuni nokuyithetha ke eyokuba ukhona na oba nomfanekiso ngqondweni kamfundisi nowakwakhe besabelana ngesondo.
Kuphinde kube khona omny umbuzwana. Ingaba uNokuzola lo yena ukhe abajonge ngamehlo enkanuko na yena abafana abaziinzwana? Ingaba mhlawumbi akamjongang umfundisi lo wabona ingathi naye uyamkhanuka, ngoko uthe asawuthetha ngemilebe wanomfanekiso ngqondweni omenze umnqwazi awaqina? Asifuni ukuyicinga siluluntu leyo tu, ngoba oosisi ingathi abavumelekanga bakhanuke amadoda bona. Usisi onenkanuko ingakumbi ozithethelayo okanye ayibalise le nto iba ngathi unobubele, le nto bathi sisifebe abakrwada. Kutheni kanene?
Eyona ngxaki sikhuliswe ingathi ukulalana kumdaka nangaphezulu kokuya endle. Umntu uyakuyibalisa into yokuba uvela endle kodwa akasoze atsho ukuba yena nomlingane wakhe bagqiba ukuzivisa kamnandi. Ngamanye amaxesha umntu wobalisa ukuba uqhiniwe, okanye isisu siyahambisa. Ingaba ukhona umntu okhe abaliselwe ngumhlobo wakhe ukuba ebesabelana ngesondo nowakwakhe, kunjalo nje wamtunusisa.
Kungani ukuba sininkwe iinkcukacha ngelindle, elinukayo kodwa azikho xa kuthethwa ngesondo, elivisa kamnandi? Kungoko ke ndisithi uluntu lukholelwa ukuba ilindle lingcono kunesondo. Xa ndizibonela imuncu kodwa loo nto leyo, ayivakali ncam ukuba izathuzeka kanjani.
Xa wonke umntu eye abe nenkanuko ngokubona indalo entle, lo nto ithetha ukuba le nto yokuba nomntu omnye akusiyonto edalwe apha engqondweni. Ukuba bekunjalo ubuzokumjonga nje omnye nokuba umhle kangakanani, nokuba amathanga okanye izigalo zakhe zinomtsalane kangakanani, ungavakalelwa tu! Futhi uvele unyuke mpela umtsalane xa nidibana ngengqondo ingakumbi ukuba uyahlekisa. Yenye yezinto ezihletywayo kodwa naye ubani unabo abantu adibana nabo aqonde ukuba: ukuba nje singashiywa sobabini nalo, kungaqhuma uthuli! Ndlela le esivana ngayo, umtsalane ubhalwe emehlweni.
Eyona nto ndiza kuyo yile, ingathi ezona zinto zincumisa intliziyo ke zezona kuthiwa zimbi, naxa sekungekho bungozi. Eyona nto yenza ukuba uNokuzola acaphuke ngala nto ithethwa ngumfundisi ngemilebe yakeh ethi ndiphuze kukuba ingqamene nesondo. Isondo leli kuthiwa limdaka kodwa wonke umntu uyalithanda. Ukuba umfundisi ebethe uthanda iinwele zikaNokuzola ebezoncuma, abulele. Kodwa ukuba ebethe uthanda iimpundwana zakhe ezingqukumbana bekuzoliwa. Isondo limdaka.
Okokugqibela, kwamkelekile kwabaninzi ukuba amadoda ancokole eviwe esithi intombi kazibani intle, kodwa oosisi abavumelekanga. Yimpambano kodwa le. Isondo limdaka kwalona. Okhanuka isondo ungcolile, kodwa limdaka ngakumbi xa likhanukwa libhinqa, kwaye lingcole kakhulu nalo? Ikhona ingqondo kule nto? Abantwana bayafunwa, kodwa soze uve kusithiwa: “khanihambeni niyovisana kamnandi sizobona abantwana.”
Akutshiwo nokuba “Nozipho kudala ndikubona ingathi umzimba awukhululekanga, khawubize uSipho akhe akutunisise mhlawumbi uzoba ngcono.” Le nto izintloni ukuyicinga kodwa eneneni baninzi abavumayo ukuba umhlaba ungayindawo enoxolo xa wonke ubani enovunyelwa athethe okusentliziyweni yakhe xa engathuki mntu.
Lilonke ndithi mna inkqatho ininzi. Makhe kuthethwe iinyani, sonwabe, khe siyeke nale nto isondo lasoloko lisenziwa ebusuku qha ngathi liyebiwa. Nxa!